एक जनाको श्रीमती मात्रै ३९, एकै घरमा बस्छन् १ सय ८१ जनाको परिवार ! – Khabar PatrikaNp
एक जनाको श्रीमती मात्रै ३९, एकै घरमा बस्छन् १ सय ८१ जनाको परिवार !
August 1, 2020 292
यतिमात्र होइन उनका श्रीमतीबाट जन्मिएका छोरा छोरी र बुहारी गरी १ सय ८१ जनाको परिवार छ । अर्को रमाइलो कुरा के छ भने उनीहरु सबै जना एउटै घरमा बस्छन्
Prevके तपाईलाई थाहा छ एक मुखे रद्राक्षको दर्शनले नसोचेको ठाउबाट धन “लाभ” हुन्छ ? “ॐ“ लेखेर शेयर गर्नुहोस ३ दिनभित्र आकस्मिक धनको योग हुनेछ !
Nextशौचालय बनाउन जमिन खन्दै गर्दा ६ शताब्दीका सुनको सिक्का फेला !
कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको किड्नी, आँखा र लिभर निकाल्ने गरिन्छ’ भन्दै अफवाह फैलाउने चिकित्सक सुवास सुब्बा लिम्बु प्रहरीले पक्राउ
दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदियालाई कोरोना पोजेटिभ र डेंगु
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (24493)
बच्चालाई एउटा कोठामा एक्लै छोडेर दम्पत्तीले झुण्डिएर देहत्याग
१३ महिनाकी छोरी सियोनालाई गम्भीर समस्या: उपचारमा २५ करोड लाग्ने [सहयोगको अपिल]